Shaxda Wareerka Ah Ee Mikel Arteta Uu Qorshaysanayo Inuu Xili-ciyaareedka Dambe Ku Dagaal-galo, Xiddigaha Ku Cusub Iyo Laacibiinta Waaweyn Ee Ka Maqan - Gool24.Net
Shaxda Wareerka Ah Ee Mikel Arteta Uu Qorshaysanayo Inuu Xili-ciyaareedka Dambe Ku Dagaal-galo, Xiddigaha Ku Cusub Iyo Laacibiinta Waaweyn Ee Ka Maqan
Arsenal ayaa xili ciyaareedka dambe lasoo shir tegi karta wejiyo ka beddelan ciyaartoyda hadda ay ku haysato Emirates, waxaana uu Mikel Arteta qorshaynayaa haddii aanay awoodda dhaqaale lugaha qabnin inuu xagaagan kusoo kordhiyo safkiisa dhawr ciyaartoy oo cusub.
Xiddiga ay kooxaha badan raadinayaan ee Kai Havertz oo khadka dhexe ee weerarka raacsan uga ciyaara Bayer Leverkuson ayaa kusoo baxay liiska ciyaartoyda uu Mikel Arteta doonayo, laakiin waxa laacibkan hore loola xidhiidhinayay kooxda Liverpool oo uu tababare Jurgen Klopp hore u calmaday.
Sida uu qoray wargeyska Le10Sport ee kasoo baxa waddanka Faransiiska, Arsenal waxa kale oo ay daoonaysaa inay xagaagan gacanta kusoo dhigto laacibka kale ee Bayer Leverkusen garabka weerarka uga ciyaara ee Moussa Diaby oo hore ugu ciyaari jiray kooxda reer France ee PSG.
Wargeysku waxa uu sheegay in Arsenal ay loollan adag u mari doonto Diaby sababtoo ah, kooxda reer Germany ee ciyaartoyda da’da yar urursanaysa ee Borussia Dortmund ayaa dhexda u xidhanaysa inay cid walba oo kale ku garaacdo saxeexa laacibkan, si uu uga mid noqdo jiilka dahabiga ah ee ay Iduna Park ku haysato.
27 kulan oo dhamaan tartamada ah oo uu Diaby u ciyaaray kooxdiisa xili ciyaareedkan, waxa uu u dhaliyey shan gool, waxase uu shaqo badan ka qabtay ciyaarta guud ee kooxda, taas oo keentay inuu soo jiito indhaha kooxaha waaweyn.
Wargeyska Le10Sport waxa kale oo uu sheegay in wakiilka Dibay uu xidhiidh fiican la leeyahay Arsenal oo uu ka shaqayn karayo in heshiiska labada dhinac la hirgeliyo, iyadoo laacibkana lagu qiimeeyey lacag dhan £26.8 milyan.
Haddaba, sidee ayay noqon doontaa shaxda Arsenal haddii labadan ciyaartoy ay kusoo biiraan?
Mikel Arteta waxa uu iibin doonaa weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang oo heshiiskiisa Arsenal uu ka hadhsan yahay sannad kaliya, iskana diiddan inuu saxeexo qandaraas cusub. Sidoo kale, Mesut Ozil ayaanay meesha waxba u oollin oo booskiisa uu qabsan doonaa Kai Harvetz, iyadoo horena uu laacibka reer Germany ugu dhibaatoonayay inuu boos ka helo safafkii Unai Emery oo khilaaf u dhexeeyey iyo Arteta oo marar badan kaydka kusoo bilaabay ama beddel ku saaray.
Halkan ka dheeho shaxda suurtogalka ah ee uu Mikel Arteta qorshaynayo inuu xili ciyaareedka dambe lasoo shir-tago:
Cabdi kaafi maxamuud says:
Caadi maahan wallhi hadiiba shaxdeydu sidaan noqoto